KEMET stocking nkesa maka Tantalum Polymer Capacitors | Circuit Ocean Int 'Co. - Tantalum Capacitor nkesa Kemet AVX
Gịnị mere ndị mmadụ ịzụta KEMET polima tantalum capacitor ngwaahịa si Circuit Ocean Company?
ase na Kemet Tantalum Polymer Capacitor site click esonụ girl "kọntaktị ụdị" ma ọ bụ email na sales@tantalum-caps.com
Reference nke KEMET Tantalum Polymer Capacitor:
KEMET Organic Capacitor (ko-CAP®) - miniature
T528 Low ESL Polymer Electrolytic maka CPU / GPU Decoupling
The KEMET Organic Capacitor (ko-okpu) bụ a siri ike electrolytic capacitor na a conductive polima cathode ike nke na-anapụta nnọọ ala ESR na mma capacitance njigide na elu frequencies. Ko-okpu agwakọta ala ESR nke multilayer seramiiki, akwa capacitance nke aluminum electrolytic na volumetric arụmọrụ nke tantalum n'ime otu n'elu ugwu ngwugwu. N'adịghị ka mmiri mmiri electrolyte dabeere capacitors, ko-okpu nwere a nnọọ ogologo arụmọrụ ndụ na elu ripple ugbu capabilities.The T528 Low ESL kpudo ihu n'ala Ọnụ Polymer Electrolytic agwakọta ultra-ala ESR na elu capacitance na a ngwugwu imewe na-enye ndị kasị ala ESL ke ahịa . Usoro isiokwu a na-enye ahụkebe arụmọrụ maka elu-ọsọ microprocessor, FPGA ma ọ bụ ASIC decoupling aghụghọ. The T528 Series utilizes a pụrụ iche nchupu imewe na-enye ohere maka a gụnyere ya ná inductance loop ebe na-abịa na a ala na profaịlụ 1.7 mm ikpe elu. Nke a capacitor usoro awade mma capacitance njigide na frequencies nke ruo 1 MHz.Applications, Ahụkarị ngwa na-agụnye elu na-agba na ihe nkesa, microprocessor decoupling na elu ripple ugbu a ngwa.
KEMET Organic Capacitor (ko-CAP®) - Akwa pụrụ ịdabere
T540 / T541 ndina nta Polymer Electrolytic maka High pụrụ ịdabere Ngwa, 2.5 - 63 VDC
The KEMET Organic Capacitor (ko-okpu) bụ a siri ike electrolytic capacitor na a conductive polima cathode ike nke na-anapụta nnọọ ala ESR na mma capacitance njigide na elu frequencies. Ko-okpu agwakọta ala ESR nke multilayer seramiiki, akwa capacitance nke aluminum electrolytic na volumetric arụmọrụ nke tantalum n'ime otu n'elu ugwu ngwugwu. N'adịghị ka mmiri mmiri electrolyte dabeere capacitors, ko-okpu nwere a nnọọ ogologo arụmọrụ ndụ na elu ripple ugbu a ike. The ndina nta Polymer Electrolytic awade otu arụmọrụ uru dị ka ndị ọzọ ko-okpu usoro na echetakwa nhọrọ jikọtara elu pụrụ ịdabere ( "HiRel") ngwa. Ndị a Commerical-Off-The-adị (ndina nta) ọkwa mmiri na-enye ọtụtụ anya ugbu a echetakwa options.The atụ aro ngwa derating n'ihi na ndị a capacitors bụ 10 - 20%, ejere ha kwesịrị ekwesị maka ngwa voltages si 2.5 ka 63 VDC. Ndị a Series bụ ndị mbụ polima electrolytic capacitor dị na odida ọnụego nhọrọ dị ka kọwaa site KEMET si ko-okpu pụrụ ịdabere Assessment usoro. Nke a na usoro utilizes ngwa ngwa ọnọdụ (voltaji na okpomọkụ) etinyere Board-n'ịnyịnya samples-amata ogologo okwu ngwaọrụ pụrụ ịdabere. The ọdịda udu dị bụ B (0.1% kwa 1,000 awa), C (0.01% kwa 1,000 awa) na D (0.001% kwa 1,000 awa). The ko-okpu pụrụ ịdabere Assessment e mepụtara usoro dị ka a N'ihi nke n'elu 10 afọ nke nnyocha na a kọwara na ọtụtụ papers.Applications, Ahụkarị ngwa na-agụnye decoupling, nzacha ma jide na-elu-na-agbachitere na aerospace ngwa na-achọ ala ESR ma ọ bụ a benign ọdịda mode.
Aluminum Organic Capacitor (AO-okpu)
The KEMET Aluminium Organic Capacitor (AO-okpu) bụ a siri ike kwuo aluminum capacitor. The cathode bụ a conductive organic polima nke utịp ke nnọọ ala ESR na mma capacitance njigide na elu ugboro. AOCAPs nwere ike ejikwara na otu ebe ala voltages ruo 100% nke gosiri voltaji na-enweghị mkpa edepuchaala rate.Since e nweghị mmiri mmiri electrolyte, na A700 awade ogologo arụmọrụ ndụ, ala ESR na elu arụmọrụ okpomọkụ. Gosiri ọrụ okpomọkụ maka A700 bụ 125 ° C. The pụta ụwa ala ESR sụgharịrị A700 adabara elu ripple ugbu a njikwa. The obere ngwugwu size, elu ripple ugbu a ike, elu ọrụ okpomọkụ, ala parasistics na elu capacitance eme ka A700 ezigbo maka elu arụmọrụ microprocessor, FPGA na ASIC decoupling aghụghọ.